Banyere Anyị - HuaHeng International Packaging Co., Ltd.
Guzosie ike na 2009, HuaHeng International Packaging Co., Ltd. bụ ọkachamara na-emepụta ọkachamara na mbipụta akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa. Ọ nwere teknụzụ mmepụta zuru oke yana akụrụngwa usoro. Ebe ọ bụ na ya oruru, n'ihi na-atụ-na-achọ pụrụ iche imewe echiche, ike oru nnyocha na mmepe otu, na-echebara ọkachamara ọrụ echiche, ọ na-akwakọba a otutu nke ọma ikpe na-enye nkwakọ ọrụ maka 200+ anụ ụlọ a maara nke ọma ụlọ ọrụ.
Anyị tumadi-eme onye-nkwụsị nkwakọ imewe, nnyocha na mmepe, mmepụta nke elu-edu igbe, onyinye igbe, kaadiboodu igbe, ịkwanyere igbe, crystal igbe, kpọọ na ntuziaka. Anyị na-emi odude ke ShenZhen na-adaba adaba njem. Lekwasị anya na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa Ihe ngwọta ahụ na-eme ka ahịa ngwaahịa ahụ dị elu na azụmaahịa ahụ na-asọmpi, ma na-agba mbọ ịnye ndị ahịa otu ọrụ nkwụsị nke "R&D, nyocha, mmepụta, na njem".
Helọ ọrụ Huaheng na-anya isi na ha nwere ezi, ọhụụ, na-akpali ma na-agbasi mbọ ike maka ịdị mma maka ndị ahịa anyị niile. Usoro nke oge a, nke emeputara emeputa na-enyere anyị aka ịnye ndị ahịa anyị ezigbo ngwaahịa ngwaahịa na asọmpi asọmpi. Na mgbakwunye na ịchekwa ngwa ọrụ dị iche iche ma na-agbanwe agbanwe, anyị na-etinye nrụsi ike na mmemme R&D site na ịtọlite ​​Designlọ Ọrụ Nhazi. 75% nke ngwaahịa anyị na-erigbu site anyị ọkachamara imewe otu. Kwa ọnwa enwere ngwaahịa ọhụụ akwadoro maka ntụnye ndị ahịa.
Ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ si HongKong, Singapore, Japan, UAE, Russia, Sweden, USA, Canada, Italy, Belgium, Spain, Austria wdg.
Helọ ọrụ Huaheng na-ekwusi ike mgbe niile n'okwukwe azụmahịa nke "enwere ekele dị ukwuu, ịdị elu dị elu, ogologo oge", Ọzọkwa, anyị na-elekwasị anya na mmepe mmepe na-aga n'ihu, mmelite ụlọ ọrụ mgbe niile, mmụba nke ọnụnọ mba ụwa, na inye nnukwu ụkpụrụ iji bulie oke uru ahịa.
Anyị kwenyesiri ike na ngwá ọrụ ọkaibe na-ahụ ezigbo mma, yana ndị otu ọkachamara na-eduga ọrụ dị mma! Anyị kwenyesiri ike na na asọmpi a na-asọmpi nke "oke ọsọ ọsọ, arụmọrụ dị elu na ogo dị elu", ị nwere ọganihu pụrụ iche na mma pụrụ iche.
Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. ka na-agbaso ụkpụrụ nke "mma, aha mbụ" ma na-agbaso echiche nke ndị ahịa na mbụ na ihe ọhụrụ. Anyị na-achọ onwe anyị uru nke ezi mma, ọnụahịa dị ala na nnyefe ọsọ ọsọ, ma n'otu oge ahụ na-ezute ihe achọrọ nke nkwakọ ngwaahịa na mbipụta mba ụwa, nke na-eme ka ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie tụkwasịrị anyị obi! Ọ na-emekwa ka ahịa azụmahịa nke ụlọ ọrụ nwee mmụba ka ukwuu. Ugbu a ndị ahịa anyị nọ na mpaghara karịrị mpaghara 30, obodo na mpaghara kwụụrụ onwe ya, na mpaghara Hong Kong, Macao na mpaghara Taiwan. A na-ere ngwaahịa anyị karịa mba 30 na mpaghara ụwa niile. Họrọ anyị, anyị ga-egosi n'ezie na nhọrọ gị ziri ezi.
1. Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. na-eji ihe dị elu na-acha akwụkwọ ndụ ihe nchebe gburugburu ebe obibi iji mee ka igbe nkwakọ ngwaahịa anyị na-eyi na-eguzogide ọgwụ, ihe mgbawa siri ike, na-egbuke egbuke na uzo, na-enweghị ntụpọ. Otutu nyocha nke ime n'ime na-achịkwa ogo nke ngwaahịa sitere na isi iyi iji hụ na arụmọrụ nke mmepụta; mmepụta kwa ọnwa nke ngwaahịa ndị dị na igbe ndị nwere ike iru ihe ruru nde 2, yana akụrụngwa zuru ezu. Ọ na-enyekwa stamping na-ekpo ọkụ, ọla ọcha dị ọkụ, agba ọla, matte na akwa Mmetụta mbipụta pụrụ iche pụrụ iche, dị ka ọka, ọka osisi na ọka akpụkpọ anụ, na-eme ka ngwugwu nkwakọ ngwaahịa ndị ahịa mara mma.
2. O nwere mpaghara ihe ọkụkụ nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 5500, gafere asambodo nnabata asambodo ndị ahịa, nwere ndị ọrụ njikwa zuru oke, ike ọrụ ike, nyocha nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na mmepe na imewe, ma nwee ngalaba na-eme ka efere efere CTP. . Companylọ ọrụ ahụ na-a attentiona ntị na nhọrọ ngwaahịa ma nakweere ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi. Ngwaahịa ahụ agafeela ọtụtụ asambodo asambodo, yana agwa dị mma. Enwere ike ịmepụta atụmatụ n'efu na ịnwale n'efu iji gboo mkpa ndị ahịa maka igbe nkwakọ ngwaahịa.
3. companylọ ọrụ ahụ na-ewebata ihe eji eji ọgbara ọhụrụ na ụzọ nnwale dị elu; adopts Advanced PLC programmable njikwa system, mfe circuit njikwa usoro, mfe mmezi. Na ohuru webatara German ebi akwụkwọ akụrụngwa si mba ọzọ, ebi akwụkwọ presses, anwụ-ọnwụ igwe, gluing igwe, na-ekpo ọkụ zọ igwe, ọkara akpaka na akpaka igbe akpaka gluing igwe, akpaka akwụkwọ egbutusị, ihuenyo obibi akwụkwọ igwe, UV obibi akwụkwọ igwe na ndị ọzọ akụrụngwa, Complete akwado ụlọ ọrụ. Mmepụta dị ọsọ ọsọ, nnyefe dị n'oge, ngwaahịa na-ezu oke.
4. Site na imewe, mmepụta, mbipụta, nhazi, na nnyefe, anyị na-emejuputa ọrụ nkwụsị, usoro njikwa ndị ahịa zuru ezu, nkwa ahịa mgbe a na-ere ahịa, site na imepụta ngwaahịa, njikwa mmepụta, njikwa oge, njikwa ngwa ahịa na ọrụ ahịa. njikwa. N'ihe banyere inye ndị ahịa ọrụ, ma nwee ike inye ndị ahịa ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa, site na nyocha na mmepụta iji kụọ ngwụcha nkwụsị.